WordPress: Ahoana no fananganana pejy Cloud tag | Martech Zone
Iray amin'ireo fiasa vaovao amin'ny lohahevitro ny pejy cloud tag. tiako rahona tag, fa tsy noho ny tena tanjon'izy ireo. Ny rahona tag asehoko dia tena fomba iray hamantarako raha mijanona amin'ny lohahevitra aho sa miova ny hafatry ny bilaogiko rehefa mandeha ny fotoana.
Mpiara-miasa bilaogera vaovao Al Pasternak, nanontany ny fomba fananganana pejy Tag amin'ny fampiasana ny Ultimate Tag Warrior Plugin.
Ity misy fomba: aorian'ny fametrahana ny plugin sy ny fanovana ny safidinao, dia ampidiroo fotsiny ity fehezan-dalàna manaraka ity ao amin'ny pejy misy anao izay aseho ny atiny. Tsy tianao ny mametraka azy eo amin'ny toeran'ny atiny… Mifanila aminy fotsiny.
Manampia pejy antsoina hoe "Tags" ary avelao foana ny atiny. Dia izay! Izao dia hasehon'ny pejy ny rahona taganao!
Febroary 22, 2007 amin'ny 4:53 PM
Tena tsara tarehy Doug ny rahona tagnao! Fomba tsara hahafantaran'ny mpamaky vaovao avy hatrany ny karazana zavatra ataonao bilaogy.
Febroary 22, 2007 amin'ny 4:56 PM
Amin'ny maha soso-kevitra am-pirahalahiana dia manoro hevitra aho mba tsy ho voafantina ny boaty "Misoratra anarana amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny alàlan'ny mailaka".
Betsaka ny olona maneho hevitra haingana ary tsy mahatsikaritra izany safidy kely izany akory. Rehefa manomboka mahazo 'spammed' amin'ny mailaka izy ireo ary tsy azony ny antony, dia mety hanelingelina izany.
Roa cents fotsiny aho! 🙂
Febroary 22, 2007 amin'ny 8:14 PM
Mahazo famantarana mifangaro aho amin'ny mari-pamantarana famandrihana… olona roa no nandefa mailaka ahy ary nilaza tamiko fa naniry izy ireo ho voafidy mialoha mba tsy hanadinoany ny misoratra anarana. Aleoko diso amin'ny fifidianana mialoha. Raha misy mamaly ny fanehoan-kevitrao, mazava ho azy fa tianao ny hahazo fanamarihana. Ary tena tsotra ny miala.
Febroary 23, 2007 amin'ny 12:18 PM
Gotcha, zavatra tsara.
24 Feb 2007 tamin'ny 11:14 maraina
Tsy maintsy ampiako eto ny hevitr'i Doug.
Rehefa manoratra fanehoan-kevitra dia miditra/manomboka dinika ny iray. Araka izany dia heveriko fa ara-boajanahary, raha misy olona te-hampandrenesina.
Febroary 27, 2007 amin'ny 1:16 PM
Mar 22, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Rahona “tsara tarehy”!
Afaka mampiasa loko mihoatra ny iray ianao amin'ny fahamendrehana.
Fomba iray hampiasana loko amin'ny marika rahonao:
- mifidiana loko lehibe, tendreo amin'ny endritsoratra lehibe indrindra;
- "Afangaro" ity loko ity ho an'ny endritsoratra kely kokoa.
Ohatra "fandokoana" ao amin'ny
May 4, 2007 amin'ny 6: 18 AM
Miezaka manangana blôgy aho izay ahafahako mampiseho bilaogin'olona maro ao anaty rahona tag. Hahomby ve izany?
May 4, 2007 amin'ny 7: 43 AM
Mahaliana, Tom. Heveriko fa tsy hahomby io vahaolana io satria misintona fotsiny amin'ny marika izay nampiana tao amin'ity bilaogy ity fotsiny. Na izany aza, azo atao ny misintona sy manangona marika amin'ny alàlan'ny Technorati's API raha toa ka ao amin'ny Technorati ny bilaogy tsirairay.
Toa tetik'asa fandaharana kely mahafinaritra!
Jun 11, 2007 ao amin'ny 9: 31 PM
Salama Mr. Doug
Mampiasa Plugin Keywords an'i Jerome aho hamorona tag-cloud. Nanoro hevitra aho hampiasa ny Plugin Keywords an'i Jerome fa tsy Ultimate Tag Warrior.
Heveriko fa sarotra loatra ny fampiasana ny Ultimate Tag Warrior. misaotra ihany.
Jun 11, 2007 ao amin'ny 9: 45 PM
Misaotra, Dendi! Nampiako tia ny plugin tao amin'ny fanehoan-kevitrao. Mino aho fa mety ho sahiran-tsaina ny Ultimate Tag Warrior.
Apr 6, 2008 ao amin'ny 2: PM PM
Soso-kevitra tsara tarehy. Misaotra ny fizarana.